Soo dejisan BartVPN 1.2.2 – Vessoft
Soo dejisan BartVPN
BartVPN – software ah si loo hubiyo in xiriir internet ilaaliyo iyo Windows XP. Software ayaa awood u ah in la doorto server isbedelka ku meel gaar ah oo IP-address ama qalabayn doorashada ee server si ay u gaaraan khasaare yar ee xawaaraha lagu jiro Browsing internet-ka. BartVPN si toos ah siisaa difaac ee software doortay liiska guud in ay adeegga internet-ka. Sidoo kale BartVPN waxay bixisaa macluumaad ku saabsan geedi socodka shaqo ee foomka mid ah midabo kala duwan, kuwaasoo mid walba uu ku tusaysaa xaalad gaar ah oo la xiriira internet-ka.
La xiriira internet Protected
Xulashada Automated ama buuga ee server ah
Control of liiska codsiyada ilaaliyo software
Comments on BartVPN:
BartVPN Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Amazon Kindle 1.11.0.40617